ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (မြင်ကွင်းကျယ်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤသည်မှာ ပုံကြီးချဲ့ထားသည့် ဒြပ်စင်အလှည့်ကျ (အလှည့်မှန်) ဇယားဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် အက်တော်မစ်အမှတ်များ၊ သင်္ကေတများ၊ အက်တော်မစ်အလေးချိန်(ဒြပ်ထု)များ၊ ဒြပ်စင်တစ်ခုစီ၏ သဘာဝအတိုင်းရှိနေသော ပေါင်းစပ်နိုင်သောတန်ဖိုး(valence or valency)များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ အလှည့်ကျဇယားသည် ဓာတုဒြပ်စင်များကို ဇယားပုံစံဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ဤဇယားကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းသည် ၁၈၆၉ခုနှစ်က ဤဇယျားကို တည်ထွင်ခဲ့သော ရုရှားလူမျိုး ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဒီမီထရီမင်ဒလိကို ဂုဏ်ပြုရပေမည်။ မင်ဒလိသည် ဒြပ်စင်တို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများ အလှည့်ကျပြောင်းလဲပုံကို ဖော်ပြနိုင်ရန် ဤဇယားကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဤဇယျား၏ အစီအစဉ်ကို ဒြပ်စင်အသစ်များ တွေ့ရှိတိုင်း၊ ဒြပ်စင်တို့၏သဘာဝ အပြုအမူတို့ကို ရှင်းပြနိုင်မည့် သီအိုရီအသစ်များ ပုံစံအသစ်များ ပေါ်ထွက်လာတိုင်းပြုပြင်ချဲ့ထွင်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခဲ့သည်။ ဤအလှည့်မှန်ဇယျားသည်ယခုအခါ ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် တွင်ကျယ်လာသည်။ များပြားလှသော ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော ဒြပ်စင်တို့၏သဘာဝအပြုအမူကိုနှိုင်းယှဉ်ရန် စံနစ်တစ်ခုအတွင်းထည့်သွင်းရန် အမျိုးအစားခွဲရန်အလွန့်အလွန် အသုံးဝင်သောပုံစံခွက်တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤဇယားကို ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊တည်ဆောက်ရေးနှင့် စက်မှု့လုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လက်ရှိစံဇယားတွင် ၂၀၁၀ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ရက်နေ့က အတည်ပြုထားသော ဒြပ်စင် ၁၁၈ မျိုး ပါဝင်သည်။
အခြေခံ ပြိုကွဲမှုမှ လူလုပ် Border shows natural occurrence of the element
အယ်လ်­ကာ­လီ­သတ္တု­များ အယ်ကာလိုင်း သတ္တုများ Lan­thanide Actinide Transition metal Post-transition metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal နို­ဘယ်­ဂက်စ်­များ
IUPAC Standard Atomic Weights Revised Archived5March 2008 at the Wayback Machine. (2005).
↑ "The periodic table of the elements"၊ International Union of Pure and Applied Chemistry၊ 2007-07-22။ 2008-02-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 February 2008။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား_(မြင်ကွင်းကျယ်)&oldid=728024" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။